Fijoroana vavolombelona :: Mpitsabo sady minisitra teo aloha voan’ny Covid-19 koa • AoRaha
Voamarina fa mitondra ny tsimok’aretin’ny Covid19 ny Profesora Andriamanarivo Mamy Lalatiana, minisitry ny Fahasalamam-bahoaka teo aloha. Voalazany fa tao anatin’ny fanatanterahana ny asa maha mpitsabo azy no nahazoany ny tsimok’aretina.
« Mijoro ho vavolombelona aho ankehitriny satria tao anatin ny fanatanterahana ny asa maha mpitsabo ahy no nahazoako ny tsimok’aretina. Maro izahay mpitsabo mamonjy ain’ olona no tratran’ny tsimok’ aretina ankehitriny », hoy ny Profesora tamin’ny antso antariby, omaly, nanamarina ny fanambarany tao amin’ny pejin’ny tambajotra sosialy « Facebook »-ny.
Ho fampahafantarana ny rehetra no anton’izao fijoroany vavolombelona izao satria efa miparitaka tokoa ny valanaretina ka tokony hitandrina amin’ny fomba rehetra izay nanentanana ny tsirairay. Nohamafisiny fa mahita hirika hidirany amin’ny olombelona hatrany ny tsimok’aretina, ka mila mitandrina ny tsirairay hisorohana ny fiparitahany. Manaraka fitsaboana ny profesora Andriamanarivo Mamy Lalatiana, amin’izao fotoana izao. Voalazany fa: « ao anatin’ny fihibohana izy amin’izao fotoana izao ».
Mirongatra izay tsy izy ity valanaretina ity eto amintsika, ankehitriny, indrindra eto an-drenivohitra. Manamarina izany ny antontan’isa navoakan’ny profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, mpitondra tenin’ny ivon-toeram-pibaikoana amin’ny ady amin’ny Covid19 (CCO) tao amin’ny fahitalavi-pirenena, omaly. « Tamin’ireo olona sivy amby valopolo voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina dia teto Antananarivo avokoa ny valo amby valopolo », hoy izy. Tafakatra telo sy telonjato sy roa arivo ireo olona voan’ity valanaretina ity, hatramin’ny nisian’izany teto Madagasikara (19 marsa 2020).
Fotsaboana covid-19/Tanàna Voara :: Hatokana ireo marary manaiky tsindrona sy vitamina C